Alisson Becker Oo Ceebeeyay Goolhayayaashii Uu Jurgen Klopp Ku Soo Shaqayn Jiray Ee Simon Mignolet & Loris Karius - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Alisson Becker Oo Ceebeeyay Goolhayayaashii Uu Jurgen Klopp Ku Soo Shaqayn Jiray Ee Simon Mignolet & Loris Karius
May 14, 2019 at 20:39 Alisson Becker Oo Ceebeeyay Goolhayayaashii Uu Jurgen Klopp Ku Soo Shaqayn Jiray Ee Simon Mignolet & Loris Karius2019-05-14T20:39:15+01:00 CAYAARAHA
Liverpool ayaa xili ciyaareedkan si wayn uga nasatay walwalkii badnaa ee ay xili ciyaareedyadii la soo dhaafay ku qabeen Simon Mignolet iyo Loris Karius.
Liverpool ayaa suuqii xagaagii hore lacag markaas rekoodh aduun ahayd waxay kula soo wareegeen Alisson Becker oo AS Roma ka tirsanaa laakiin waxa uu muujiyay sida uu Jurgen Klopp ugu saxsana in uu meesha ka saaray Simon Mignolet iyo Loris Karius.
Kadib ceebtii uu goolhaye Loris Karius ka sameeyay finalkii Champions League ee xili ciyaareedkii hore, waxa uu Jurgen Klopp kooxdiisa ku riixay in ay lacag markaas waali u muuqatay ka bixiyaan Alisson.
Laakiin hadda waxaa xaqiiq noqotay in lacagtaasi ayna noqon mid khasaartay balse waxayba u muuqataa mid faa’iido wayn u keentay kooxda Anfield ka dhisan.
Xili ciyaareedkii hore Jurgen Klopp ayaa goolka kooxdiisa dhawr jeer isku bad-badalay Simon Mignolet & Loris Karius laakiin waxay sameeyeen gool badbaadin aad uga hoosaysa inta uu Alisson xili ciyaareedkan soo sameeyay.
Xili ciyaareedkii la soo dhaafay Simon Mignolet ayaa darbooyinkii lagu soo tuuray kooxdiisa Liverpool ee goolal lagu dhalin karayay waxa uu ka sameeyay boqolkiiba 59 gool badbaadineed halka Loris Karius uu sameeyay boqolkiiba 56% gool badbadineed.
Laakiin Alisson Becker ayaa xili ciyaareedkan soo sameeyay gool badbaadin boqolkiiba 79% ah waana mid aad uga saraysa heerkii gool badbaadinta labadii goolhaye ee Reds uga soo horeeyay ee Simon Mignolet & Loris Karius.
In Alisson uu sameeyay boqolkiiba 79% gool badbaadineed waxay la micno tahay in ay taasi ka caawisay in uu noqoday goolhayihii labaad ee abid ugu shabaq nadiifsanaanta badnaa horyaalka Premier League waxaana ka horeeya oo kaliya Petr Cech.
Alisson ayaa abaal marinta gacanta dahabka ah ee Golden Glove-ka waxa uu ugu guulaystay 21 kulan oo aan hal gool lagaga dhalin Premier League waana rekoodhkii abi ugu fiicnaa ee uu goolhaye Liverpool ahi gaadho halka uu ka yahay goolhayihii labaad ee abid Premier Leauge ugu shabaq ilaalinta fiicnaa.
« Somalia’s economic growth pace could rise to 3% in 2019 – IMF
Al Shabaab oo shaqaale samafal ka afduubtay Gobolka Gedo »